दोलखाको मेलुङमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
दोलखाको मेलुङमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु !
६ पुस, दोलखा ।
मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ गोलेगाउँमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा शैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का अन्दाजी ६० बर्षिय डम्बर थपलिया रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख प्रहरी नायब निरिक्षक भानुभक्त नेपालले जानकारी दिनुभयो । मंगलबार दिउँसो गोलेगाउँबाट शैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ८ भैँसेतर्फ आउँदै गरेको बा ६१ प १७०३ नम्बरको मोटरसाईकल आफैँ चिप्लिएर दुर्घटना हुँदा चालक अन्दाजी ४४ बर्षिय मोहनबहादुर थपलिया गम्भिर घाईते हुनुभएको छ ।
कच्ची बाटोमा मोटरसाईकल चिप्लिएर सडकबाट अन्दाजी ७० मिटर तल खसेर दर्घटना भएको प्रहरीको भनाई छ । घटनाको बारेमा थप जानकारी लिनका लागि प्रहरी निरिक्षक अञ्जन कोईरालाको टोली घटनास्थलतर्फ हिँडिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।